Olee otu encrypt DNS okporo ụzọ na Linux na DNSCrypt? | Site na Linux
Olee otu encrypt DNS okporo ụzọ na Linux na DNSCrypt?
.Nnɛ nchekwa nke data gị, yana njikọ gị na ntanetị na ngwaọrụ gị abụghịzi ihe nke ahụ naanị ndị nwere ihe ọmụma dị elu ma ọ bụ ụlọ ọrụ aghaghị ime.
N'oge a ka anyị hụ otu anyị nwere ike isi mụbaa nzuzo anyị na Linux, ihe anyị ga - eme bụ ijikwa onye ga - ahụ ozi nyocha DNS anyị.
Agbanyeghị na ọ gaghị ezochi okporo ụzọ IP niile, ọ ga - egbochi mwakpo nkwụsịtụ DNS dị egwu, na - eme ka nchekwa dị mma.
Na Linux, ụzọ kachasị mma iji zoo okporo ụzọ DNS bụ iji DNSCrypt.
DNSCrypt bụ netwọọdụ netwọkụ ezubere iji nyochaa okporo ụzọ DNS (Ngalaba Aha System) n'etiti kọmputa onye ọrụ na recursive aha nke sava.
DNSCrypt na-ekpuchi okporo ụzọ DNS a na-agbanweghị agbanwe dị n'etiti onye ahịa na onye na-edozi DNS na ọrụ ịmepụta ihe iji chọpụta nsị. Ọ bụ ezie na ọ naghị enye njedebe na njedebe, ọ na-enyere aka n’ichebe netwọkụ mpaghara site na mwakpo ndị mmadụ na-etiti.
Ọ na-ebelata ọgụ mgbokwasị nke dabeere na UDP site na ịchọrọ ajụjụ ka ọ dịkarịa ala dị ka azịza kwekọrọ. Ya mere, DNSCrypt na-enyere aka igbochi spoofing DNS.
DNSCrypt nwekwara ike-eji maka ịnweta akara.
1 Olee otú iji wụnye DNSCrypt na Linux?
2 Esi hazi DNSCrypt na Linux?
Olee otú iji wụnye DNSCrypt na Linux?
Iji wụnye ngwa ọrụ a na sistemụ anyị, anyị ga-agbaso usoro ndị anyị kesara n'okpuru dịka nkesa Linux ha na-eji.
I kwesịrị ịma na ndị ọrụ DNSCrypt gụnyere ihe fọrọ nke ka ọ bụrụ ọtụtụ n'ime nchekwa nke nkesa Linux.
Kwachaar wụnye DNSCrypt na Debian, Ubuntu, Linux Mint na nkesa sitere na ndị a, ha aghaghi imeghe onu ma mebie iwu ndia n'ime ya:
N'ihe banyere ndị bụ Arch Linux ọrụ na nkwekọrịta:
Ndị na-eji Fedora na nkwekọrịta:
N'ikpeazụ, n'ihi na ndị na-eji ụdị OpenSUSE ọ bụla:
sudo zypper wụnye dnscrypt-proxy
Esi hazi DNSCrypt na Linux?
Ozugbo arụnyere ọrụ ahụ na sistemụ, ọ dị mkpa ka anyị hazie ya ebe ọ bụ ezie na awụnyere ya, ọ naghị arụ ọrụ.
Maka nke a, anyị ga-eji ọrụ DNS, nke enwere ọtụtụ nhọrọ site na n'efu na nhọrọ akwụ ụgwọ.
Ọ dị mkpa ịga na DNS ọzọ, kama ịrapagidesi ike na nke ISP gị na-enye ha, ma ọ bụrụ na ịchọrọ karịa nchekwa.
Ha nwere ike ịhọrọ nke ga-adịrị ha mma, anyị nwere nhọrọ nke openDNS, CloudFlare n'etiti ndị ọzọ,
Ugbu a Anyị ga-pịa akara ngosi ntanetị wee dezie njikọ ndabere ya.
Ebe aí Anyị ga-edo onwe anyị nhọrọ IPv4, ma chọọ "sava DNS". Na igbe ederede "DNS Servers", kpoo adreesị na-esonụ:
Naanị tinye adreesị DNS ndị a pMaka IPv4:
Mgbe maka IPv6:
Mgbe ị hazisịrị sọftụwia DNSCrypt, ọ dị oke mkpa na a ga-amalitegharịkwa onye njikwa netwọkụ na iwu ndị a.
RockSmith nanị pịnye:
Ntọala ndị bụ isi nke na-ekwe ka ngwá ọrụ DNSCrypt rụọ ọrụ. Ihe ikpeazụ ị ga - eme bụ itinye profaịlụ DNS na ahịrị iwu.
Ma ọ bụ ya, ha na-eji nnukwu ọrụ a na sistemụ ha. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwụsị ọrụ DNSCrypt, pịnye iwu na-esonụ
Y Iji gbanyụọ ya kpamkpam, ma gbochie ya ịgba ọsọ na mmalite, pịnye:
You nwere ike ịchọta ọtụtụ ozi na weebụ, otu esi ahazi DNSCrypt, yana ọrụ DNS dị iche iche enwere ike iji ya mee ihe, naanị nyochaa DNSCript Wiki. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmatakwu banyere ya, ị nwere ike ịkpọtụrụ njikọ a nakwa nke ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Olee otu encrypt DNS okporo ụzọ na Linux na DNSCrypt?
Ndewo. Akwa isiokwu. Ọ na-adọrọ mmasị dị ka mgbochi nke mwakpo MitM. Ma, ọ na-enye m njehie na-esote "[ERROR] Not resolving aha ya bụ [Cloudflare-dns.com] dị na [/usr/share/dnscrypt-proxy/dnscrypt-resolvers.csv] list" mgbe ị na-abanye iwu sudo dnscrypt-proxy - R cloudflare-dns.com.
Lelee dnscrypt-resolvers.csv faịlụ na DNS CloudFlare na-adịghị depụtara.
Ọ ga - ekwe omume na emeliteghị ya ma ọ bụ na ọ bụ maka ihe ụfọdụ etinyeghị ya?
Echere m na "Cloudflare-dns.com" na-ezo aka na sava DNS ị ga - eji kama IPS DNS
Nkwado maka TrueCrypt na veracrypt na Tails 3.9 ga-abata na Septemba 5
Kali Linux 2018.3 dị ebe a na akụkọ